I-Upscale Bodyrub • I-Body Rub ne-NuRu Massage
Izinhlobo zethu zihlolwe kabanzi, zisebenza lapha kuphela, futhi zinengqondo, GORGEOUS, futhi ziyithanda ngokweqiniso le mboni. Silapha ukuzosizakala. Ukukucwilisa e-oasis yethu edolobheni futhi sikunikeze umuzwa ophawulekayo okushiya uzizwa ulula, ulula futhi uvuselelwa.
Imodeli yethu yebhizinisi ivame ukulingiswa ngaphandle kwempumelelo ngoba umnyombo wethu wangempela - ubunjalo bethu bangempela bungangokuthi bungaphindwa, bungafakwa. Siyakukhathalela ngobuqotho! Siyabakhathalela abahlinzeki bethu, abasebenzi bethu, nanoma ngubani ohlangana nathi lapha e-Upscale Bodyrub.
Sigcina indawo yethu isesimweni esihle ngamalineni ahlanzekile amasha, izihlambi zikanokusho, nazo zonke izinto ongazidinga ukuze ube nokuhlangenwe nakho okuvelele. Sizimisele ukuba yisibani sokukhanya kwelanga osukwini lwakho. Inhloso yethu ukukushiya umomotheka ebusweni bakho, imfudumalo enhliziyweni yakho, nezinkumbulo ezijabulisa kakhulu ukuthi uziphatha nawe kulo lonke usuku lwakho.
Sikholelwa eqinisweni ekukhangiseni.
ASIKE SIPHINDE SIVULELE noma SILULE futhi SISHintshe.
ISIKHATHI SAKHO SIYABALULEKA KITHI - ASISOZE SIPHEZE INCWADI NOMA IZINCWADI EZIMBILI UKUQOKWA KWAKHO, FUTHI SIQINISEKA UKUTHI SIHLALA SIKULUNGELELE NJALO UMA UBHEKA.
Ngakho-ke sishayele ucingo, bhuka lokho kuqokwa namuhla. Isamukeli sethu esihle singaphendula noma imiphi imibuzo ongaba nayo.
Ngoba ufanelwe ukujabulela okungcono kakhulu.
W 37th St, New York, NY 10018, eU.SA.
I-1 (800) 877 3794
Monday: 11 ekuseni - 9 pm
NgoLwesibili: 11 ekuseni - 9 pm
ngoLwesithathu: 11 ekuseni - 9 pm
ULwesine: 11 ekuseni - 9 pm
Friday: 11 ekuseni - 9 pm
NgoMgqibelo: 11 ekuseni - 9 pm
NgeSonto: 11 ekuseni - 9 pm